Internet an-tserasera na casino an-tserasera, tsy mandao ny trano
Casino Internet, maninona no lasa malaza be? Ny lalao filokana voalohany dia natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-17. Lalao Roulette, poker sy lalao karatra hafa izay mifototra amin'ny mety ho fampidirana, fampidirana volabe adrenalinina sy vola azo hatao.
Androany, ny filokana dia mifandraika tsy amin'ny risika sy vola ihany, fa amin'ny casino an-tserasera ihany koa. Ny trano filokana voalohany dia naorina tamin'ny taonjato faha-1842 tany Eropa, ary ny marimarina kokoa dia ny any Frantsa. Tany Monaco tamin'ny XNUMX no namoronana ny kinova Eoropeana amin'ny roulette, izay nahasarika mpilalao marisika sy mpanankarena. Ny fironana casino dia niparitaka haingana tany amin'ny kaontinanta hafa - indrindra tany Etazonia, izay toerana misy trano filokana maro ankehitriny. Eto isika dia afaka manonona ilay malaza Las Vegas - tanàna efitra izay renivohitra filokana eto an-tany. Na izany aza, efa an-taonany maro, ny casino an-tanety dia very laza noho ny fanavaozana. Ny trano filokana an-tserasera dia niditra ny lalao ary mitsimoka toy ny holatra izy ireo.
Ny casinos an-tserasera voalohany
Efa tamin'ny taona 2000 dia noforonina ireo filokana an-tserasera voalohany, izay nahasarika ny sain'ny mpampiasa Internet. Miaraka amin'ny fivelaran'ny Internet, dia nisy fampisehoana vaovao nifindra avy amin'ny tontolo tena izy ho amin'ny tontolo tena izy. Mihoatra lavitra ny nantenain'ny tsirairay ny fampandrosoana - anio izao dia manondro ny fepetra ny tontolon'ny Internet. Tsy misy maha samy hafa azy amin'ny filokana, ny filokana amin'ny Internet dia manome fahafaha-manao ary zavatra betsaka azo atao noho ny filokana an-tany.
Ity no antony tokony hampiasanao ny casino an-tserasera:
• Fampiononana - araka ny efa noresahintsika dia afaka milalao poker na roleta isika rehefa mipetraka amin'ny seza an-trano mahasoa.
• Fandraisana - tsy maninona izay onenanay - misy trano filokana an-tserasera ho an'izay manana fidirana amin'ny Internet. Ity dia fanampiny lehibe ho antsika, Poloney izay tsy manana trano filokana betsaka any Polonina (voararan'ny lalàna amin'ny fomba mahomby ny fananganana trano filokana vaovao). Izy io koa dia vahaolana mety indrindra ho an'ireo izay monina amin'ny tanàna kely ary tsy afaka miditra amin'ireo tanàna lehibe kokoa misy filokana. Rehefa dinihina tokoa, ny olon-dehibe rehetra dia manan-jo hanana fotoana fialan-tsasatra kely ao amin'ny casino, fa tsy mila manomboka amin'ny dia lavitra mankany amin'ny lava-bato filokana. Ity no omen'ny casino an-tserasera.
• Lalao maro kokoa - andao hiatrika izany - Ny filokana poloney dia tsy ny mpitarika amin'ny resaka fisian'ny tolotra sy ny karazana lalao. Na dia amin'ny casino tsotra aza dia afaka miantehitra amin'ny lalao Black Jack, roulette na milina slot isika, nefa na dia any aza dia tsy mampatahotra ny isan'izy ireo.
• Tsy misy famerana ara-bola sy fanodinana haingana - misaotra ireo fantsom-pandoavam-bola marobe, tsy mila manana kitapom-bola be eny an-tananay izahay. Mila famindrana iray monja amin'ny kaontinao ianao hilalao amin'ny casino an-tserasera.
• Ireo hetra sy tolotra manokana - Ny trano filokana mahazatra dia misoroka bonus na maimbo vonjimaika. Mifanohitra amin'izany aza, ny casino an-tserasera dia manasa mpilalao, mampiakatra avo roa heny ny kitapom-bolany ary mandrindra tolotra manokana - hitanao fa mamorona kokoa ny filokana amin'ny Internet fa tsy filokana filokana efa reraka fotsiny.
Ny hany tokana mankany amin'ny casino an-tserasera dia ny tsy fisian'ity rivo-piainana tokana ity. Izay rehetra afaka mahalala izany (sy ny ankamaroany) misafidy amin'ny Internet amin'ny Internet.